Nyatsokoshesa Unhu hwaJehovha | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uruund Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“Ivai vatevedzeri vaMwari, sevana vanodiwa.”—VAEF. 5:1.
Tingawedzera sei kukoshesa kwatinoita unhu hwaJehovha?
Chii chinoita kuti munhu ataurike naye?
Tingatevedzera sei Jehovha panyaya yokusasarura?
1. (a) MuKristu angafunga nezveunhu hupi huna Jehovha? (b) Tichabatsirwa sei nokuongorora unhu hwaMwari?
PAUNOFUNGA nezvaJehovha, unhu hupi hwaanahwo hunotanga kuuya mumusoro mako? Vakawanda vedu tinofunga nezverudo, kururamisira, uchenjeri, uye simba. Asi tinoziva kuti Jehovha ane unhu hwakawanda hunoita kuti timude. Jehovha anotova neunhu hunopfuura 40 hwakasiyana-siyana, uye humwe nehumwe hwakakurukurwa mumabhuku edu. Chimbofunga kuti ipfuma inokosha zvakadini ine chokuita neunhu hunofadza hwaJehovha yatinogona kuwana patinenge tichidzidza toga kana kuti nemhuri! Kudzidza unhu hwakadaro kungatibatsira sei? Kunogona kuwedzera kukoshesa kwatinoita Baba vedu vokudenga. Kana tikawedzera kukoshesa Jehovha, chido chedu chokuswedera pedyo naye uye chokumutevedzera chichawedzerawo.—Josh. 23:8; Pis. 73:28.
2. (a) Taura muenzaniso unoratidza kuti tingawedzera sei kukoshesa kwatinoita unhu hwaJehovha. (b) Tichakurukurei?
2 Asi, ‘kukoshesa’ chimwe chinhu kunomborevei? Kunoreva kunzwisisa ukoshi chaihwo hwechimwe chinhu. Kukoshesa kwatinoita chinhu kunogona kuwedzera zvishoma nezvishoma. Izvi tingazvifananidza nezvokudya zvatisati tambodya. Tinowedzera kuzvifarira patinotanga kunzwa kunhuwirira kwazvo, patinozozvidya, uye patinozokwanisa kuzvibika toga. Saizvozvowo, kukoshesa kwatinoita unhu hwaJehovha kunowedzera patinohudzidza tohuziva, tohufungisisa uye tohutevedzera muupenyu hwedu. (VaEf. 5:1) Chinangwa chenyaya ino nedzimwe mbiri dzinotevera ndechokuti tiwedzere kukoshesa unhu hwaMwari hwatisingawanzofungi nezvahwo sezvatinoita unhu hwake hukuru. Paunhu humwe nehumwe, tichakurukura kuti: Hunorevei? Jehovha anohuratidza sei? Uye tingatevedzera sei Jehovha pakuratidza unhu humwe nehumwe?
JEHOVHA ANOTAURIKA NAYE
3, 4. (a) Ungatsanangura sei munhu anotaurika naye? (b) Jehovha anotivimbisa sei kuti anotaurika naye?
3 Ngatitangei kukurukura nezveunhu hwokuva anotaurika naye. Ungatsanangura sei munhu anotaurika naye? Ungati, ‘Munhu ane mutsa, akasununguka, uye ari nyore kutaura naye.’ Kakawanda unogona kuona kuti munhu uyu anotaurika naye kana kuti kwete nokuteerera zvaanotaura uye nokuona zvaanoita muviri wake zvakadai semaoko, chiso, kana dzimwe nhengo dzomuviri.
4 Jehovha anoratidza sei kuti anotaurika naye? Kunyange zvazvo ari Musiki wezvose ane masimba ose, anotivimbisa kuti anoda kuteerera minyengetero yedu uye kuipindura. (Verenga Pisarema 145:18; Isaya 30:18, 19.) Tinogona kutaura naMwari kwenguva refu, panzvimbo yatinenge tada uye chero nguva. Tinogona kutaura naye takasununguka tichiziva kuti haambofi akatizvidza. (Pis. 65:2; Jak. 1:5) Shoko raMwari rinotsanangura Jehovha semunhu zvichiratidza kuti anoda kuti titaure naye. Somuenzaniso, munyori wepisarema Dhavhidhi akanyora kuti “maziso aJehovha ari” patiri uye kuti ‘ruoko rwake rworudyi runoramba rwakatibatisisa.’ (Pis. 34:15; 63:8) Muprofita Isaya akafananidza Jehovha nemufudzi wemakwai achiti: “Achaunganidza makwayana noruoko rwake; uye achaatakura pachipfuva chake.” (Isa. 40:11) Pafunge! Jehovha anoda kuti tive pedyo naye sezvinoita gwayana duku rakagumbatirwa pachipfuva chemufudzi wemakwai ane rudo. Chokwadi tina Baba vanotaurika navo! Tingatevedzera sei Jehovha panyaya iyi?
UNHU HUNONYANYA KUKOSHESWA
5. Nei zvichikosha kuti vakuru vave vanhu vanotaurika navo?
5 Munguva pfupi yapfuura, Zvapupu zvinoshingaira zvinobva munyika dzakasiyana-siyana zvakabvunzwa kuti, “Unhu hupi hwamunonyanya kukoshesa pamukuru?” Ruzhinji rwakapindura kuti, “Kuva munhu anotaurika naye.” Ichokwadi kuti muKristu oga oga anofanira kuvavarira kuva neunhu uhwu, asi zvinonyanya kukosha kuti vakuru vave vanhu vanotaurika navo. (Isa. 32:1, 2) Imwe hanzvadzi yakataura chinoita kuti ifunge kuti unhu uhwu hunokosha chaizvo, ichiti: “Kana mukuru achitaurika naye, ndipo chete patinokwanisa kubatsirwa nehumwe unhu hwakanaka hwaangava nahwo.” Mashoko iwayo ndeechokwadi. Asi chii chinoita kuti munhu ataurike naye?
6. Chii chinoita kuti munhu ataurike naye?
6 Kuti munhu ataurike naye anotofanira kufarira vamwe zvichibva pamwoyo. Kana mukuru aine hanya nevamwe uye achida kuzvipira kuti avabatsire, hama nehanzvadzi, kusanganisira vaduku vachazviona. (Mako 10:13-16) Carlos ane makore 12 anoti: “Zvinondifadza pandinoona vakuru vachinyemwerera uye vachiratidza mutsa muImba yoUmambo.” Ichokwadi kuti hazvina kukwana kuti mukuru ataure kuti anotaurika naye, asi anofanira kuratidza unhu ihwohwo. (1 Joh. 3:18) Angazviita sei?
7. Nei kuva nebheji regungano kuchiwanzoita kuti pave nekukurukurirana, uye tinogona kudzidzei?
7 Funga nezvemuenzaniso uyu. Munguva pfupi yapfuura, imwe hama yainge iri mundege ichibva kugungano rainge raitirwa kune imwe nyika uye yainge iine bheji rayo regungano. Mushandi womundege paakaona bheji rakanzi “Umambo hwaMwari Ngahuuye!” akati kuhama yacho, “Chokwadi ngahuuye, tinofanira kutaura zvakawanda nezvenyaya iyi.” Vakazokurukura uye mushandi wacho akagamuchira magazini edu achifara. Vakawanda vedu vakava nezviitiko zvakada kuita seizvi. Asi nei bheji regungano richiwanzoita kuti vanhu vatange kukurukura? Nokuti rinoita seriri kuudza vanhu kuti: “Sunungukai kutaura neni. Ndibvunzei kuti ndiri kuenda kupi.” Bheji chiratidzo chinoita kuti vanhu vazive kuti tinoda kuvaudza zvatinotenda. Saizvozvowo, vakuru vechiKristu vanofanira kuita zvinhu zvinoita sevari kuti kuhama dzavo: “Sunungukai kutaura neni.” Zvimwe zvinhu zvacho ndezvipi?
8. Vakuru vangaratidza sei kuti vanonyatsofarira vamwe, uye izvozvo zvinobatsira sei ungano?
8 Tsika dzinosiyana munyika nenyika, asi patinowanzonyemwerera hama nehanzvadzi dzedu, patinovakwazisa zvine ushamwari tichivabata chishanu, tinenge tichinyatsoratidza kuti tinovafarira. Ndiani anofanira kutanga kuita izvi? Ona muenzaniso watakasiyirwa naJesu. Mateu anoti Jesu paakaita mumwe musangano nevadzidzi vake, “akaswedera pedyo, akataura navo.” (Mat. 28:18) Saizvozvowo, mazuva ano vakuru ndivo vanotanga kutaura nehama dzavo. Izvozvo zvinobatsira sei ungano? Imwe hanzvadzi piyona ine makore 88 yakati: “Kunyemwerera kunoita vakuru uye mashoko anokurudzira avanondiudza pandinopinda muImba yoUmambo zvinoita kuti ndivade chaizvo.” Imwe hanzvadzi yakatendeka yakatiwo: “Vanhu vanogona kuzviona sezvinhu zviduku, asi kana mukuru akandigamuchira pamusangano achinyemwerera, ndinozvikoshesa chaizvo.”
ANOTAURIKA NAYE UYE ANOWANIRA VAMWE NGUVA
9, 10. (a) Jehovha anoratidza muenzaniso wakanaka wei? (b) Vakuru vangaita sei kuti vawane nguva nevamwe?
9 Zviri pachena kuti hatikwanisi kuva vanhu vari nyore kutaura navo kana tisingawani nguva yokuva nevamwe. Jehovha muenzaniso wakanaka panyaya iyi. Haasi “kure nomumwe nomumwe wedu.” (Mab. 17:27) Vakuru vanogona kutevedzera muenzaniso iwoyo nokuwana nguva yokukurukura nehama nehanzvadzi, vangava vaduku kana vakuru, misangano yechiKristu isati yatanga uye yapera. Imwe hama piyona yakati: “Kana mukuru akandibvunza upenyu, omira kuti anditeerere, ndinonzwa ndakosheswa chaizvo.” Imwe hanzvadzi yave ichishumira Jehovha kwemakore anoda kusvika 50 yakati: “Vakuru vanowana nguva yokutaura neni pamisangano vanoita kuti ndinzwe ndichikosha.”
10 Ichokwadi kuti vafudzi vechiKristu vanofanirawo kuita mamwe mabasa. Asi pamisangano, vanofanira kuva nechinangwa chokutanga vatarisira makwai.
11, 12. (a) Kusasarura kunosanganisirei? (b) Jehovha muenzaniso wokusasarura pakudii?
11 Chimwe chinhu chinoita kuti tide Jehovha chaizvo ndechokuti haasaruri. Kusasarura kunorevei? Kunosanganisira kusava netsvete, uye kubata vamwe zvakaenzana. Kusasarura kwechokwadi kunoonekwa nezvinhu zviviri: mafungiro uye mabatiro atinoita vamwe. Nei tichidaro? Nokuti kana munhu asingasaruri pamafungiro ake izvozvo zvichaita kuti abate vanhu vose asingasarure. MuMagwaro echiKristu echiGiriki, shoko rakashandurwa kuti “haasaruri” rinoreva “kusatarisa chiso,” kureva kusafarira chiso chemumwe kupfuura chemumwe. (Mab. 10:34) Saka munhu asingasaruri anobata vamwe maererano neunhu hwavo kwete maererano nezvavari nechokunze kana mamiriro avo ezvinhu.
12 Jehovha ndiye muenzaniso mukuru panyaya yokusasarura. Shoko rake rinotaura kuti “haasaruri” uye kuti haana “waanosarura.” (Verenga Mabasa 10:34, 35; Dheuteronomio 10:17.) Izvozvo zvinoratidzwa nezvakaitika mumazuva aMosesi.
Vanasikana vaZerofehadhi vakaonga kusasarura kwaMwari (Ona ndima 13, 14)
13, 14. (a) Vanasikana vashanu vaZerofehadhi vakasangana nedambudziko ripi? (b) Jehovha akaratidza sei kuti haasaruri?
13 VaIsraeri pavainge vava pedyo nokupinda muNyika Yakapikirwa, vamwe vanasikana vashanu vainge vasina kuroorwa vakasangana nedambudziko. Raiva rei? Vaiziva kuti mhuri yavo yaifanira kuwana munda wainge wavimbiswa baba vavo sezvainge zvavimbiswa dzimwe mhuri dzechiIsraeri. (Num. 26:52-55) Asi baba vavo, Zerofehadhi vedzinza raManase, vainge vafa. Maererano netsika, kodzero yokuwana munda yaifanira kuva yevanakomana vaZerofehadhi, asi iye aingova nevanasikana chete. (Num. 26:33) Sezvo mumhuri macho maisava nemwanakomana aizopiwa munda, zvaireva here kuti hama dzavo ndidzo dzaizopiwa munda wacho, ivo vosara vasina nhaka?
14 Vanasikana vacho vashanu vakaenda kuna Mosesi vakabvunza kuti: “Nei zita rababa vedu richifanira kubviswa pakati pemhuri yavo nokuti vakanga vasina mwanakomana?” Vakateterera kuti: “Haiwa, tipei nhaka pakati pehama dzababa vedu.” Mosesi haana kuti, ‘Hakuna mutemo wakadaro.’ Asi “akaenda nenyaya yavo pamberi paJehovha.” (Num. 27:2-5) Jehovha akati kudii? Akati kuna Mosesi: “Vanasikana vaZerofehadhi vari kutaura zvakarurama. Unotofanira kuvapa nhaka pakati pehama dzababa vavo, uye unofanira kuita kuti vagare nhaka yababa vavo.” Jehovha haana kugumira ipapo. Akatoita kuti uve mutemo, akarayira Mosesi kuti: “Kana murume chero upi zvake akafa asina kuva nomwanakomana, munofanira kubva maita kuti nhaka yake igarwe nomwanasikana wake.” (Num. 27:6-8; Josh. 17:1-6) Kubva ipapo, vakadzi vose vechiIsraeri vaisangana nedambudziko iroro vainge vava kudzivirirwa.
15. (a) Jehovha anobata sei vanhu vake, kunyanya vaya vasina anodzivirira? (b) Ndedzipi dzimwe nyaya dzomuBhaibheri dzinoratidza kuti Jehovha haasaruri?
15 Chokwadi chisarudzo ichocho chairatidza mutsa uye kusasarura! Jehovha akaitira zvakanaka vakadzi ava vainge vasina anodzivirira, sezvaakaita kuvaIsraeri vaiva mumamiriro ezvinhu akanaka. (Pis. 68:5) Iyi inongova imwe yenyaya dzakawanda dzomuBhaibheri dzinoratidza chokwadi chinofadza chokuti: Jehovha haana rusaruro pavashumiri vake vose.—1 Sam. 16:1-13; Mab. 10:30-35, 44-48.
TINOGONA KUTEVEDZERA JEHOVHA
16. Tingaitei kuti tisava nerusaruro?
16 Tingatevedzera sei Jehovha panyaya yokusasarura? Yeuka kuti kusasarura kunosanganisira zvinhu zviviri. Kana tiri vanhu vasina rusaruro tichabata vamwe pasina rusaruro. Chokwadi, tose zvedu tinogona kuzviona sevanhu vasingasaruri. Zvisinei unogona kubvuma kuti nguva dzose hazvisi nyore kunyatsoongorora manzwiro edu tisingazvinyeperi. Saka tingaitei kuti tizive kana vamwe vachitiona sevanhu vasingasaruri? Jesu paaida kuziva kuti vanhu vaiti aiva ani, akabvunza shamwari dzake dzaaivimba nadzo kuti: “Vanhu vari kuti Mwanakomana womunhu ndiani?” (Mat. 16:13, 14) Tinogona kutevedzera Jesu panyaya iyi. Unogona kubvunza shamwari yaunovimba nayo kuti ikuudze kana uchizivikanwa semunhu asingasaruri. Kana ukanzi unenge unoti sarurei vanhu nemhaka yerudzi rwavo, chinzvimbo chavainacho mukugarisana, kana kuti mari yavo, unofanira kuitei? Nyengetera nemwoyo wose kuna Jehovha nezvemanzwiro ako, uchikumbira kuti akubatsire kugadzirisa mafungiro ako kuti anyatsoratidza kusasarura kwaanoita.—Mat. 7:7; VaK. 3:10, 11.
17. Tingaratidza sei kuti hatisaruri?
17 Muungano yechiKristu, tinoratidza kuti tinoda kutevedzera Jehovha panyaya yokusasarura nokubata hama nehanzvadzi dzedu dzose noruremekedzo uye nemutsa. Somuenzaniso, panyaya yokukoka vatinonamata navo kudzimba dzedu, tinoda kukokawo varombo, nherera kana chirikadzi uyewo vamwe vakasiyana-siyana. (Verenga VaGaratiya 2:10; Jakobho 1:27.) Uyewo, mubasa rokuparidza Umambo, tinoudza vanhu vakasiyana-siyana mashoko akanaka tisingasaruri kusanganisira vaya vanobva kune dzimwe nyika. Zvinofadza chaizvo kuti tine mabhuku anotsanangura Bhaibheri mumitauro inenge 600. Chokwadi izvi zvinonyatsoratidza kuti hatisaruri!
18. Ucharatidza sei kuti unokoshesa unhu hwaJehovha hwokuva anotaurika naye uye hwokusasarura?
18 Chokwadi, patinofungisisa nezvokuti Jehovha anotaurika naye uye kuti haasaruri, kumuda kwatinoita kunowedzerawo. Kumuda zvakanyanya, kuchaita kuti tide kunyatsotevedzera unhu hwake, tichihuratidza pamabatiro atinoita hama dzedu uye vatinoparidzira.
“Jehovha ari pedyo navose vaya vanodana kwaari.”—Pis. 145:18 (Ona ndima 9)
‘Jehovha Mwari wenyu haana waanosarura.’—Dheut. 10:17 (Ona ndima 17)
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA June 2013